First Man (2018) | MM Movie Store
အခြိနျကာလကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှဈ …..ဇူလိုငျလ ၁၆ရကျ ၁၃:၃၂နာရီ ခနျ့ပေါ့…………စိတျကူးယဉျခဲ့ရတဲ့ လမငျးကွီးဆီကို သမိုငျးရဲ့ ပထမဆုံးအနနေဲ့ကြှနျတျော ထှကျခှာသှားရတော့မှာ ….အောငျမွငျမှာလား ကရြှုံးမှာလား.. …ကြှနျတျော ဆကျမတှေးတော့ပါဘူး…….ဆုံးသှားတဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့သမီးလေးကို ဝမျးနညျးစှာ သတိရနတောလား…. ….
ကြှနျတေျာ့ထကျအရငျ လကမ်ဘာကိုသှားရောကျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ သူငယျခငျြးတှရေော.. .ကောငျးမှနျတဲ့ဘုံဘဝမှာ ပြျောရှငျကနြေပျနပွေီလား…..ဒါမှမဟုတျ ကြှနျတျောပဲ ဒီအခနျးကဉျြးလေးထဲမှာ စကျနှိုးမဲ့အခြိနျကိုစောငျ့စားရငျး ခွောကျခွားနမေိတာလား … .
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အမွငျအာရုံကလဲ အကနျ့အသတျနဲ့ပဲမွငျနရေတယျလကျတဈဝါးသာသာလောကျ မှနျပွတငျးလေးကနေ ကောငျးကငျကွီးကို မြှျောကွညျ့ရငျးကမ်ဘာလောကကွီးကို နှုတျဆကျထှကျခှာရတော့မယျကြှနျတျောခဈြခငျတဲ့ မိသားစုလေးကတော့ ကမ်ဘာမွပေျေါကအိမျလေးထဲမှာ ကနျြနခေဲ့မှာလေ
ဘယျသူမှ မရှိတဲ့ လကမ်ဘာပျေါမှာကြှနျတျောတို့ အထီးကနျြနမှောလား ပွီးတော့ ကမ်ဘာမွပေျေါ ပွနျမရောကျလာနိုငျခဲ့ရငျရော…….အဲ့လိုတှေးနရေငျးနဲ့ပဲ……ခရီးစဉျထှကျခှာဖို့အတှကျတဆယျ…..ကိုး….ရှဈ……ဆိုပွီး… .အခြိနျမှတျနတေဲ့အသံကိုမိုကျခရိုဖုနျးထဲကနေ ကွားလိုကျရတယျ……အတိတျကိုတှေးပွီး လှမျးဆှေးနလေို့ မဖွဈတဲ့အခြိနျကို ရောကျနပွေီလေ…..
အာရုံကိုစုစညျးပွီး….လကျရှိပစ်စုပ်ပနျကိုပဲ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးမှကြှနျတျောတို့ အသကျရှငျနိုငျမှာပေါ့…..သူ့နာမညျက နေးလျ အမျးစထရောငျး…တဲ့၁၉၃၀ ဩဂုတျလ ၅ရကျနမှေ့ာ အမရေိကနျနိုငျငံ အိုဟိုငျးယိုးပွညျနယျ..ဝါပါကိုနီတာမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ
လူသားတို့ရဲ့သမိုငျးမှာပထမဦးဆုံးသောလကမ်ဘာပျေါ ခွခေနြိုငျခဲ့သူလဲ ဖွဈတယျအဲ့အခြိနျကာလတုနျးက သိပ်ပံပညာရှငျတှဟောအာကာသအကွောငျးကိုအမြားကွီး သိပျမသိကွသေးပါဘူး….လထေဲပြံသနျးတဲ့ နညျးစနဈကိုလညျးသူတို့ခတျေကာလကနေ တှကျကွညျ့ရငျ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၆၀ကြျောခနျ့ကမှစတငျသိရှိခဲ့ကွတာပါ
အမရေိကနျဟာ ဆိုဗီယကျနိုငျငံကို အနိုငျရခငျြတဲ့ဇောနဲ့သာအခြိနျတိုလေးအတှငျးမှာ ထှကျခှာနိုငျဖို့ ပွငျဆငျခဲ့ကွပမေယျ့အရမျးလှယျကူတဲ့ အရာမြိုးတော့ မဟုတျခဲ့ပါဘူးလကမ်ဘာပျေါခွခေနြိုငျဖို့ ပေးဆပျခဲ့ရတဲ့ တနျကွေးတှလေညျး မနညျးခဲ့ပါဘူးငှကွေေးတဈခုတညျးတငျ မကဘဲ အာကာသယာဉျမှူးမြားစှာရဲ့အသကျတှကေိုလညျးစတေးခဲ့ကွရပါတယျ
နိုငျငံရေးအရ အဆငျမပွခေဲ့တာတှလေဲ ရှိခဲ့ပါသေးတယျအောငျမွငျတော့မှသာ ဝိုငျးဝနျးလကျခုပျတီးခဲ့ကွတာဖွဈပွီးမအောငျမွငျခငျမှာတော့ အဓိပ်ပါယျမရှိဘူးလို့ လကျညှိုးထိုးခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ်စတဈခုပါ….သူဟာ အဖကျဖကျက ထိုးနှကျတိုကျခိုကျတာတှကေို နာကညျြးစရာလို့မမွငျဘဲခှနျအားအဖွဈပွောငျးလဲ အသုံးပွုခဲ့တဲ့သူတဈယောကျပါပဲ
ပွီးတော့နောကျတဈခကျြက ” အောငျမွငျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ နောကျကှယျမှာထကျမွတျတဲ့မိနျးမတဈယောကျ ရှိတယျ”ဆိုတဲ့စကားအတိုငျးပဲသူ့ရဲ့အမြိုးသမီးကလညျး အကောငျးဆုံးသော ပါရမီဖွညျ့ဖကျတဈယောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ
ကိုယျ့ယောကျြားအပျေါကို နားလညျမှု အပေးနိုငျဆုံးမိနျးမတဈယောကျအဖွဈ ဒီရုပျရှငျလေးမှာ မွငျရမှာပါ…..အနှဈခြုပျပွောရရငျတော့ First Man ဇာတျကားဟာ IMDB 7.3ရရှိထားပွီးအနှဈသာရပွညျ့ဝတဲ့ လကမ်ဘာပျေါ ပထမဆုံးခွခေခြဲ့သူ“နေးလျ အမျးစထရောငျး”ရဲ့အတ်ထုပ်ပတ်တိကို ပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ရုံတငျဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားပဲဖွဈပါတယျ
အချိန်ကာလကတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ် …..ဇူလိုင်လ ၁၆ရက် ၁၃:၃၂နာရီ ခန့်ပေါ့…………စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့ လမင်းကြီးဆီကို သမိုင်းရဲ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် ထွက်ခွာသွားရတော့မှာ ….အောင်မြင်မှာလား ကျရှုံးမှာလား.. …ကျွန်တော် ဆက်မတွေးတော့ပါဘူး…….ဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့သမီးလေးကို ဝမ်းနည်းစွာ သတိရနေတာလား…. ….
ကျွန်တော့်ထက်အရင် လကမ္ဘာကိုသွားရောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရော.. .ကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေပြီလား…..ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်ပဲ ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စက်နှိုးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်စားရင်း ခြောက်ခြားနေမိတာလား … .
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်အာရုံကလဲ အကန့်အသတ်နဲ့ပဲမြင်နေရတယ်လက်တစ်ဝါးသာသာလောက် မှန်ပြတင်းလေးကနေ ကောင်းကင်ကြီးကို မျှော်ကြည့်ရင်းကမ္ဘာလောကကြီးကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရတော့မယ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့ မိသားစုလေးကတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကအိမ်လေးထဲမှာ ကျန်နေခဲ့မှာလေ
ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ လကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ အထီးကျန်နေမှာလား ပြီးတော့ ကမ္ဘာမြေပေါ် ပြန်မရောက်လာနိုင်ခဲ့ရင်ရော…….အဲ့လိုတွေးနေရင်းနဲ့ပဲ……ခရီးစဉ်ထွက်ခွာဖို့အတွက်တဆယ်…..ကိုး….ရှစ်……ဆိုပြီး… .အချိန်မှတ်နေတဲ့အသံကိုမိုက်ခရိုဖုန်းထဲကနေ ကြားလိုက်ရတယ်……အတိတ်ကိုတွေးပြီး လွမ်းဆွေးနေလို့ မဖြစ်တဲ့အချိန်ကို ရောက်နေပြီလေ…..
အာရုံကိုစုစည်းပြီး….လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်နိုင်မှာပေါ့…..သူ့နာမည်က နေးလ် အမ်းစထရောင်း…တဲ့၁၉၃၀ ဩဂုတ်လ ၅ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်..ဝါပါကိုနီတာမြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်
လူသားတို့ရဲ့သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးသောလကမ္ဘာပေါ် ခြေချနိုင်ခဲ့သူလဲ ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်ကာလတုန်းက သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအာကာသအကြောင်းကိုအများကြီး သိပ်မသိကြသေးပါဘူး….လေထဲပျံသန်းတဲ့ နည်းစနစ်ကိုလည်းသူတို့ခေတ်ကာလကနေ တွက်ကြည့်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ခန့်ကမှစတင်သိရှိခဲ့ကြတာပါ
အမေရိကန်ဟာ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံကို အနိုင်ရချင်တဲ့ဇောနဲ့သာအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ထွက်ခွာနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပေမယ့်အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ အရာမျိုးတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလကမ္ဘာပေါ်ခြေချနိုင်ဖို့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ တန်ကြေးတွေလည်း မနည်းခဲ့ပါဘူးငွေကြေးတစ်ခုတည်းတင် မကဘဲ အာကာသယာဉ်မှူးများစွာရဲ့အသက်တွေကိုလည်းစတေးခဲ့ကြရပါတယ်
နိုင်ငံရေးအရ အဆင်မပြေခဲ့တာတွေလဲ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်အောင်မြင်တော့မှသာ ဝိုင်းဝန်းလက်ခုပ်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမအောင်မြင်ခင်မှာတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ လက်ညှိုးထိုးခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ….သူဟာ အဖက်ဖက်က ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တာတွေကို နာကျည်းစရာလို့မမြင်ဘဲခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ
ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က ” အောင်မြင်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာထက်မြတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် ရှိတယ်”ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်း အကောင်းဆုံးသော ပါရမီဖြည့်ဖက်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ကိုယ့်ယောကျာ်းအပေါ်ကို နားလည်မှု အပေးနိုင်ဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် ဒီရုပ်ရှင်လေးမှာ မြင်ရမှာပါ…..အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ First Man ဇာတ်ကားဟာ IMDB 7.3ရရှိထားပြီးအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ လကမ္ဘာပေါ် ပထမဆုံးခြေချခဲ့သူ“နေးလ် အမ်းစထရောင်း”ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုံတင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်